April | 2016 | AMAPHUPHO
By info on April 29, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ubona umyeni noma unkosikazi wakho kusho ukuthi uzophumelela ezintweni ozenzayo – ikakhulukazi emsebenzini. Uma ungowesifazane oshadile uphupha ukuthi ulwa nomunye wamakhosikazi omyeni wakho kusho ukuthi uzama ukunihlukanisa nomyeni wakho. Uma uwina manilwa kusho ukuthi imizamo yakhe ayisebenzi noma umuthi wakhe awunawo amandla anele.
By info on April 15, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi kunento oyigibelayo uya phezulu kusho ukuthi uzophumelela kangakanani empilweni. Uma ufika phezulu uzofinyelela izinhloso zakho empilweni othandweni nasemsebenzini. Uma ungafiki noma uwa phansi kusho ukuthi uzodumala. Uma usugibelile wafika phezulu emaphusheni akho futhi usuyehla kusho ukuthi kuzoba noshintsho oluhle empilweni yakho maduzane.
By info on April 8, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi ungcolile kuwuphawu lwesikhathi esinzima ekusaseni lakho. Kusho kakhulu ukuthi kungenzeka ube namahloni ngenxa yento oyenzayo. Uma ungcolile ngoba omunye umuntu ekujikijela ngezinto kusho ukuthi uzokwenza izitha ngakho qaphela izinto ozitshela abantu. Kodwa uma ungcole ngoba uwile phansi kusho ukuthi uzokhuthuzwa noma ulahlekelwe yimali maduzane.
Amaphupho ngamaketanga nezintambo
By info on April 1, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi usebensiza amaketanga noma izintambo izinto ezikuhluphayo zizokushiya. Uzoba nempumelelo kodwa mhlawumbe kuzodingeka ukuthi usebenze khona izinto ezinhle zizokwenzeka. Uma kukhona amafindo kwiketanga noma intambo inhlanhla enhle uma ungakhipha ifindo kodwa uma ungakwazi yibhadi. Uma ungumuntu olibophayo ifindo kusho ukuthi ubudlelwane bakho kuzoba obuqinile.